Dagaalo la soo sheegey iney ka dhaceen duleedka Magaalada Kismaayo – idalenews.com
Ciidamada u dhexeeya ciidamada dhowlada oo ay wehliyaan kuwa Kenya ee dhowaan ka mid noqdey ciidamada AMISON iyo kuwa xarakada haysta magaalada Kismaayo ee Alshabaab ayaa la sheegey iney ka dhacayaan gobolka Jubadda Hoose qiyaastii meel 50km u jirta magaalada dekada ah ee Kismaayo. Ciidamada huwanta ayaa dadaalkii ugu dambeeyay ugu jira sidii ay ku qabsan lahaayeen Magaalada muhiimka ah ee Kismaayo, maalin kadib markii Al-Shabaab ay gacantooda ka baxday magaalo xeebeedka Marka oo ay la wareegeen Ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM.
Wararka ka imaanaya magaalada Kismaayo ayaa sheegaya in xiisado dagaal ay ka jiraan deegaano hoos-yimaada magaalada, kuwaasoo qiyaastii 50-KM u jira magaalada, iyadoo dadka deegaanka ay bilaabeen inay ka barakacaan.
Dagaalada oo ka socda deegaano duleedka ka ah magaalada Kismaayo ayaa la sheegayaa inay ka qeyb qaadanayaan diyaarado dagaal ay leeyihiin Kenya.
Saraakiil ka tirsan dowladda ayaa sheegay inay horumaro ka sameeyeen dagaalada tan iyo shalay ay kula jireen Shabaab, isla markaana ay u soo siqeen dhanka magaalada Kismaayo.
Inkastoo aan wali la ogeyn qasaaraha ay geysteen dagaalada oo saddex maalmood ee u dambeeyay si goos goos ah uga socday deegaano u dhaxeeya Afmadow iyo Kismaayo, hadana ma jirto deegaano rasmi ah oo ay gaareen Ciidamada marka loo eego gulufkooda dagaal.
Al-Shabaab ayaa wada iska caabin xoog leh oo ay kula jiraan Ciidamada huwanta, si ay isaga difaacaan duulaanka ay ku soo yihiin magaalada Dekeda leh ee Kismaayo.
Shariif Xasan iyo saaxiibadiisa oo kulan deg deg ah ku balamey doorashada guddoonka sare ka dib ka dib